Uyivula njani okanye uyivale iPrezentimenti yePowerPoint ka-2019
Emva kokuba ugcine ifayile yakho Inkcazo yeMicrosoft PowerPoint 2019 kwi-hard drive yakho, ungayifumana kwakhona kamva xa ufuna ukwenza utshintsho olongezelelekileyo okanye ukuyiprinta. Njengoko unokuthelekelela, iPowerPoint ikunika malunga ne-2,037 yeendlela zokufezekisa ukubuyisa. Nazi izinto ezimbini eziqhelekileyo:
Cofa kwiTebhu yefayile ukutshintshela kwi-Backstage View uze ukhethe umyalelo ovulekileyo.
Cinezela iCtrl + O.
Zombini ezi ndlela zinokusa kwisikrini esivulekileyo kwi-Backstage View, njengoko kubonisiwe apha. Ukusuka apha, unokukhetha ifayile kuluhlu lweentetho ezisandula ukuvulwa. Okanye, unokuvula ifayile oyigcinileyo kwiakhawunti yakho ye-OneDrive.
Ukuvula ifayile kwi-Backstage View.
Ukukhangela ikhompyuter yakho kwifayile, cofa kabini le PC. Oku kuvelisa ibhokisi yencoko yababini evulekileyo, njengoko kubonisiwe. Ibhokisi yencoko yababini evulekileyo inolawulo olwenza ukuba ukwazi ukukhangela iifolda ezahlukeneyo kwihard drive yakho ukhangela iifayile zakho. Ukuba uyazi ukuba uyivula njani ifayile nakwesiphi na isicelo seWindows, uyazi ukuba ungayenza njani kwiPowerPoint (kuba ibhokisi yencoko yababini evulekileyo intle ngokufanayo kuyo nayiphi na inkqubo yeWindows).
Ibhokisi yencoko yababini evulekileyo.
Ukuba ubonakala ngathi ulahlekile kwifayile, rummage ejikeleze iifolda ezahlukeneyo ukubona ukuba ungayifumana na. Mhlawumbi ugcine ifayile kwifolda engalunganga ngengozi. Jonga kwakhona upelo lwegama lefayile. Mhlawumbi iminwe yakho ibingekho kumqolo wasekhaya xa uchwetheza igama lefayile, endaweni yoko Shakespeare1.pptx, ugcine ifayile njenge Djslrd[rstr2.pptx. Ndiyakucaphukela xa kusenzeka oko.
Indlela ekhawulezayo yokuvula ifayile kwibhokisi yencoko yababini evulekileyo kukucofa kabini ifayile. Oku kuyakusindisa ekubeni ucofe ifayile kube kanye kwaye ucofe u-Kulungile. Ukucofa kabini kukwenza izihlunu ezikhawulezayo kwiminwe yakho yesalathiso.
IPowerPoint igcina umkhondo weefayile osandula ukuzivula kwaye uzibonisa kwimenyu yeFayile. Ukuvula ifayile osandula ukuyivula, cofa kwiFayile ithebhu, khetha ngoku kwi-Backstage View, emva koko ujonge uluhlu lweefayile kwicala lasekunene lemenyu. Ukuba ifayile oyifunayo ikuluhlu, cofa kuyo ukuze uyivule.
Uwuvala njani umboniso wePowerPoint 2019
Emva kokuba uyigqibile kwaye uyigcinile intetho yakho, ufike kwixesha lokuyivala. Ukuvala umboniso kuluhlobo lokuqokelela amaphepha akho, uwabeke kakuhle kwifolda, kwaye ubuyisele ifowulda kwifayile yayo efanelekileyo. Umboniso uyanyamalala kwikhompyuter yakho. Sukuba nexhala: Ifakwe ngokukhuselekileyo kwihard drive yakho apho ungafikelela kuyo kamva ukuba ufuna njalo.
Ukuvala ifayile, cofa indawo ethi Vala iqhosha elivela phezulu ngasekunene kwiWindows Power window. Ngenye indlela, unokucofa indawo yeFayile uze ukhethe Vala, okanye usebenzise indlela emfutshane yebhodi yezitshixo Ctrl + W. Kodwa ukucofa iqhosha lokuVala yeyona ndlela ilula yokuvala ifayile.
Akunyanzelekanga ukuba uvale ifayile ngaphambi kokuba uphume kwiPowerPoint. Ukuba uphuma kwi-PowerPoint ngaphandle kokuvala ifayile, i-PowerPoint ngobabalo ikuvalela le fayile. Esona sizathu sokuba ungafuna ukuvala ifayile kukuba ufuna ukusebenza kwifayile eyahlukileyo kwaye awufuni ukugcina zombini iifayile zivulekile ngaxeshanye.
Ukuba wenze utshintsho ukusukela oko wagcina ifayile, iPowerPoint inikezela ukugcina utshintsho lwakho. Cofa ku Gcina ukugcina ifayile ngaphambi kokuba uvale okanye ucofe Musa ukuLahla ukulahla naluphi na utshintsho olwenzileyo kwifayile.
Ukuba uvale zonke iinkcazo ezivulekileyo zePowerPoint, unokufumanisa ukuba uninzi lwePowerPoint imiyalelo yenziwe engenamsebenzi. (Zingwevu kwimenyu.) Musa ukoyika. Ukuba uvula inkcazo okanye uyila entsha, imiyalelo ibuyela ebomini.
I-loratadine yokuphendula ngokuthe ngqo
chukumisa i-id kwimacbook yomoya
iiapps eziza ne-iphone
udlala njani ukusinda kwe-minecraft
ctrl alt del ayisebenzi